Siya bhizinesi kutanga-kumusoro, yemahara kunyorera tsamba template
Yakatumirwa ne Tranquillus | Sep 5, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Iwe unoda kugadzira kana kutora bhizinesi, ingave iri SAS, SASU, SARL kana imwe, uku uchichengeta rako razvino basa? Ziva kuti chero mushandi ane mvumo yekutora zororo rekugadzirwa kana kutora bhizinesi. Uye zvakare, zvimwe zvinongedzo zvinofanirwa kutarisirwa. Heano maitiro ekuteedzera echikumbiro zororo rekumisa kana kutora bhizinesi. Iwe zvakare uchapihwa muyenzaniso tsamba yekukumbira.
Maitiro ekuenderera mberi nechikumbiro cheyakabhadharwa zororo rekusika bhizinesi?
Paunoshandira kambani, unogona kunge uine zano rekutanga bhizinesi. Nekudaro, zvinoda imwe nguva yemahara pane yako chikamu. Iyo poindi ndeyekuti, iwe haudi kusiya rako razvino basa, asi iwe unoda iyo nguva yekupedzisa yako projekiti. Ziva ipapo kuti chero mushandi anogona kubatsirwa kubva kuzororo kuti agadzire kambani.
Zvinoenderana nechinyorwa, L3142-105 yeLabhodhi Code yakagadziriswa nechinyorwa 9 chemutemo n ° 2016-1088, wa Nyamavhuvhu 8, 2016, unogona kunyatso kukumbira zororo kubva kune waunoshandira. Uye zvakare, chako chikumbiro chichava pasi pemamwe mamiriro.
Kuti ubatsirwe nezororo iri, unofanirwa kutanga wave nehukuru hwemakore maviri mukambani imwe chete kana muboka rimwe chete uye usina kubatsirwa nazvo mukati memakore matatu apfuura. Iwe unofanirwa zvakare kuve neprojekti bhizinesi rekugadzira risiri mukukwikwidzana neiro rauri kushanda parizvino.
Nekudaro, iwe unogona kuona iyozororo raunoda chero ikasapfuura gore rimwe chete. Iwe unogona zvakare kuivandudza kune rimwezve gore. Nekudaro, iwe hauchazogashira muhoro panguva ino, kunze kwekunge wasarudza basa renguva isina kuzara. Izvo zvakati, iwe unogona kukumbira kuendesa kumberi kune ako akabhadharwa zororo reti.
VERENGA Gadzirira Chomukati Yekuvhura Mharidzo Yemazororo
Kuti ukumbire zororo rekugadzirwa kana kutora bhizinesi kana kurerutsa CCRE, unofanirwa kuzivisa waunoshandira mwedzi miviri isati yasvika zuva rekuenda kwako pazororo, usingakanganwe kutaura nezvenguva yaro. Ziva, zvisinei, kuti iwo mazuva ekupedzisira uye mamiriro ekuti uwane zororo rako akagadzwa pamwe chete chibvumirano mukati mekambani.
Kuti uwane iyo CEMR, unofanirwa kunyora tsamba uchikumbira zororo rekusika bhizinesi. Iwe unofanirwa ipapo ugozvitumira kune waunoshandira chero neposvo uchishandisa yakanyoreswa tsamba ine kubvuma kwekugamuchira, kana neemail. Tsamba yako inozotaura izvo chaizvo chinangwa chechikumbiro chako, zuva rako rekuenda pazororo pamwe nekureba kwaro.
Pane imwe nguva waunoshandira agamuchira chikumbiro chako, vane mazuva makumi matatu ekupindura nekukuzivisa iwe. Nekudaro, anogona kuramba chikumbiro chako kana usati waita zvinodiwa. Kuramba kunogona zvakare kuitika kana kuenda kwako kune mhedzisiro mukuvandudzwa kwekambani. Mune ino kesi, iwe une mazuva gumi nemashanu mushure mekugamuchira kuramba kuramba kunyunyuta nedare remabhizimusi kana ukasabvuma danho iri.
Pamusoro pezvo, kana waunoshandira akagamuchira chikumbiro chako, vanofanirwa kukuzivisa nezvechibvumirano chavo mukati memazuva makumi matatu wagamuchira. Pfuura nguva ino yekupedzisira uye kana usiri kuratidzwa kwewaunoshandira, chikumbiro chako chichaonekwa sechakapihwa. Kune rimwe divi, kuenda kwako kunogona kumisikidzwa kwemwedzi mitanhatu kubva pazuva rako rekukumbira kwekuenda. Izvi zvinonyanya kuitika kana ichi ichiitwa panguva imwechete neyevamwe vashandi. Iyi tsika inogamuchirwa kuitira kuve nechokwadi chekumhanya kwebhizinesi.
VERENGA Shandisa CCI zvakanaka mune email
Zvakadii mushure mekubva?
Chekutanga pane zvese, iwe unogona kusarudza pakati pekugumisa chibvumirano chako chebasa kana kuramba uchishanda. Nekudaro, iwe unofanirwa kuzivisa waunoshandira nezvechishuwo chako chekudzoka kubasa mwedzi inokwana kuita mitatu isati yapera zororo. Yenyaya yekutanga, iwe unogona kumisa chibvumirano chako pasina ziviso, asi nekugamuchira muripo panzvimbo yechiziviso.
Kana iwe ukasarudza kuramba uchishanda mukambani, unogona kudzokera kunzvimbo yako yekare kana chinzvimbo chakafanana kana zvichidikanwa. Zvako mabhenefiti saka zvichave zvakafanana neako usati waenda pazororo. Iwe unogona zvakare kubatsirwa nekudzidziswa kuti uzvigadzirise iwe pachako kana zvichidikanwa.
Nzira yekunyora sei tsamba yezororo yekugadzira bhizinesi?
Chikumbiro chako cheCEMR chinofanira kutaura zuva rako rekubva, iyo nguva yaunoda yezororo rako pamwe neicho chaicho chirongwa chako. Naizvozvo unogona kushandisa anotevera matemplate echikumbiro zororo uye nekudzoka kubasa rekukumbira.
75 ndeye rue de la grande porte
Mu [Guta], pa [Zuva]
Tsamba yakanyoreswa inobvuma kutambira
Musoro: Chikumbiro chekuenda pazororo rekugadzira bhizinesi
Kuve mushandi mukambani yako, kubva [zuva], ini parizvino ndinotora chinzvimbo che [chinzvimbo chako]. Nekudaro, zvinoenderana nechinyorwa L. 3142-105 cheFrench Labor Code, ndinoda kuti ndikwanise kubatsirwa kubva kuzororo rekugadzirwa kwebhizinesi, iro basa richave rakavakirwa pane [taura chirongwa chako].
Saka saka ndichave ndisipo kubva [musi wekubva] kusvika [musi wekudzoka], saka kwenguva yakati [taura huwandu hwemazuva ekusavapo], kana uchitendera.
Kumirira danho kubva kwauri, ndokumbira ubvume, Madam, Changamire, kuvimbiswa kwekufungisisa kwangu kukuru.
Panyaya yechikumbiro chekudzosa
Musoro: Chikumbiro chekudzoreredzwa
Parizvino ndiri pazororo kutanga bhizinesi kubva [musi wekubva].
Ini ndinokuzivisa iwe nezvechishuwo changu chekutangazve basa rangu rekare mukambani yako, iro rinotenderwa muchinyorwa L. 3142-85 cheLabhodhi Code. Kana, zvakadaro, chinzvimbo changu chisisipo, ndinoda kutora chinzvimbo chakafanana.
Kupera kwezororo rangu kwakarongerwa [zuva rekudzoka] uye saka ndichave ndiripo kubva musi iwoyo.
Ndokumbirawo mubvume, Madam, Changamire, mune vimbiso yekufungisisa kwangu kwepamusoro.
VERENGA Natsiridza maemail ako ehunyanzvi ane mafomula akagadziridzwa zvakanaka
Dhawunirodha "Ye-yeku-chikumbiro-kubva-CCRE-1.docx"	Dururira-une-demande-de-CCRE-1.docx - Yakadzoserwa ka 2636 - 13 Kb
Dhawunorodha "In-iyo-kesi-ye-yeku-kudzoresa-chikumbiro-1.docx"	Mune-iyo-iyo-kesi-ye-yeku-kudzoresa-chikumbiro-1.docx - Yakadzoserwa 2606 nguva - 13 Kb
Siya bhizinesi kutanga-kumusoro, yemahara kunyorera tsamba template January 8th, 2022Tranquillus
pashureYega kudzidzisa account: zvese zvaunoda kuti uzive
zvinoteveraGadzira tsamba yekukumbira kwekuchengeteka kwekuzvipira kufamba
Zivisa kuenda kwako pazororo rekubereka kune waunoshandira
Chiyeuchidzo chehurukuro ye cybercourtoisie
Chirevo che chiitiko, chishandiso chakakosha chekuzivisa basa rako.
Iyo yekunyora danho rekunyora zvakanaka